Fenerbahce Oo Dalab Ka Gudbinayso Jack Wilshere bisha Janaayo - Ceelhuur Online
Home > Ciyaaraha > Fenerbahce Oo Dalab Ka Gudbinayso Jack Wilshere bisha Janaayo
September 10, 2017 Hafsa Haji419
Fenerbahce ayaa lagu soo waramayaa inay isku dayayso inay lasoo saxiixato ciyaaryahanka khadka dhexe ee Arsenal Jack Wilshere marka uu suuqa kala iibsiga dib u furmo bisha Janaayo.
25 jirkaan ayaan qeyb ka aheyn tababaraha Gunners Arsene Wenger qorshihiisa koowaad ee xilli ciyaareedkaan, islamarkaana aan weli qandaraas cusub u saxiixin, inkastoo qandaraaskiisa haatan uu dhacayo xagaaga soo aadan.
Xiddiga heerka caalami ee dalka England ayaa xagaagaan kooxo dhowr ah oo ay ku jirto Fenerbahce, waxaana lagu soo waramayaa inuu isbuucii ku qaato £ 90,000-toddobaadkii.
Sida laga soo xigtay The Mirror, Fenerbahce ayaa sameysay isku dayday ay ku guuldareysatay oo ahaa in Wilshere ay ku iibsato 10 milyan ginni Isniinta, maalinta ugu danbeysa ee suuqa kala iibsiga Turkiga, waxaana sidoo kale la sheegay inuu diirada u saaranyahay bisha janaayo.
Fenerbahce ayaa sidoo kale ku guul darreysatay inay u dhaqaaqdo saxiixa Diego Costa, lakiin waxa ay ku guuldareysteen inay heshiis amaah ah kula soo wareegaan weeraryahanka Tottenham Hotspur Vincent Janssen.
Qoyska Diego Costa Oo Ku Laabtay Madrid
Isku Aadka Wareega 16 Ee Uefa Champions League
December 12, 2016 December 12, 2016 Hafsa Haji
Harry Kane Oo Noqonaya Kabtanka England Kulanka Slovenia
October 4, 2017 Hafsa Haji
AC Milan Oo Doonaysa Inay Dib U Keenaan Thiago Silva